काठमाडौँ - एभोकाडोलाई कतिपयले ‘घ्यूफल’ भनेर पनि चिन्छन् । एभोकाडो एउटा पोषिलो फल हो जुन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ । तर, यो फलको महत्वबारे कमैलाई मात्र थाहा छ । यो फलमा विभिन्न २० थरिका भिटामिन तथा खनिज पाइन्छ । जसले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याँउछ । एभोकाडो मोटोपन, मधुमेह, मुटुको रोग कम गर्नको लागि सहयोगी मानिन्छ । तैपनि, सबैलाई यो फलको स्वाद मन नपर्न सक्छ । मन नपरे पनि स्वास्थ्यप्रति सजग रहनेहरूले भने एभोकाडो खान रुचाउँछन् । एभोकाडोमा अत्याधिक मात्रामा पोटासियम पाइन्छ, जुन अरु फलफूल वा खानेकुरामा पाइँदैन ।...
अहिले धेरैले चामलको विकल्पमा गहुँको रोटी खाने गर्छन् । कतिपय रोगको कारण होस् वा तौल घटाउने चक्करमा, रोटी उपयुक्त हुने बुझाई धेरैको छ । यद्यपि गहुँको रोटी एवं गहुँको पिठोबाट बनेको परिकार वास्तवमै लाभदायक हुन्छ त ? किनभने गहुँ धेरै मानिसले प्रयोग गर्ने अन्न हो । यसले २० प्रतिशत भन्दा धेरै उर्जा र पोषकतत्वको आपूर्ती गर्छ । सदियौंदेखि खाँदै आएको गहुँको रोटीमा यस्तो घातक कुरा के हुन्छ त ? खासमा यसमा हुने घातक पदार्थ भनेको ग्लुटेन नामक एक प्रकारको प्रोटिन हो । ग्लुटेन गहुँ, जौ, रायोमा पाइन्छ र यी अन्नबाट बन्ने सबैप्रकारका परिकारहरुमा ग्लुटेन हुन्छ । ग्लुटेन...
कोरोनामुक्त भएपछि कतिपय मानिसले अन्य समस्या पनि सामना गरिरहेका छन्। कसैलाई छिटै थकाइ लाग्ने त कसैलाई सास लिन समस्या भइरहेको होला। कसैलाई मुटुको समस्या त कसैलाई अन्य समस्याहरु देखिन थालेको सुन्न र देख्न पाइन्छ। कोभिड ठीक भएपछि पनि यी कुरामा ध्यान नदिए ज्यान जानसक्छ ! जनचेतनाका लागि सक्दो सेयर गरौँ चिकित्सकहरुका अनुसार पोस्ट कोडिभ केयर अर्थात कोरोनाबाट मुक्त भएपछि पनि स्वास्थ्यको ख्याल उति नै आवश्यक हुन्छ। हप्तौँ वा महिनौँसम्म पनि सतर्कता अपनाउन आवश्यक हुन्छ। नत्र सानो लापरबाहीले पनि ठूलो समस्या निम्याउन सक्छ। यसका लागि मेघा हस्पिटलले सवृसुलभ स्वास्थ्य...
काठमाडौं । घ्युकुमारी एक जडिबुटी हो । यो प्राय जसो सबैको घरमा सजिलै पाईन्छ । शहर बजारतिर घरको छतमा, आँगनमा गमलामा रोप्ने गरिन्छ भने कुनै ठाउँमा यसको खेती नै गरिन्छ । घ्युकुमारीलाई आर्युवेदिक औषधीका रुपमा लिइन्छ । यो स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । घ्युकुमारी बिभिन्न रोगहरुका लागि औषधीको रुपमा काम गर्छ । घ्युकुमारी सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक हुन्छ । यो हरेक मौसममा सजिलै पाइन्छ । घ्युकुमारी सेवन गर्नुका लाभबारे आउँनुहोस चर्चा गरौं । १, घ्युकुमारी दैनिक रुपमा सेवन गर्दा यसले समग्र शरीर र आन्द्रामा जम्मा भएका विषाक्त पदार्थलाई...
काठमाडौँ । हाम्रो शरीरमा किड्नी अर्थात मृगौलाले रगत सफा गर्ने काम मात्र गर्दैन, पानीको सहीस्तर कायम राख्ने र हर्मोन स्रावित गर्ने काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यसैले मानव शरीरका लागि किड्नीको महत्वपूर्ण स्थान छ । त्यसैले यसलाई स्वस्थ राख्नु जरुरी छ। त्यसका लागि यो आठ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छः मृगौला फेल हुनुको अर्थ हो मृगौलाले काम गर्ने दर १५ प्रतिशतभन्दा कम हुनु । मृगौला फेल हुनु केही दिन पहिला शरीरले केही संकेत दिन थाल्दछ । त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । डाक्टर अबरार मुल्तानीले यस्तै ६ संकेतका बारेमा बताएका छन्ः १. पिसावको मात्रा अचानक...
Showing 1 to5of 35 | 123 > Last ›